နာမည်ကျော်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ ငြင်းမိလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ | News Bar Myanmar
နာမည်ကျော်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ ငြင်းမိလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ
ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက် ဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်မှုဟာ အရေးကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်။ အချို့ဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်မှုတွေဟာ ကောင်းမွန် လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့အတွက် သူတို့မပါတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကို စဉ်းစားလို့တောင်မရနိုင်အောင်ဖြစ်စေပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာတော့ မိမိနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းလှတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ငြင်းမိမလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. IU ( My Mister)
IU ဟာ My Sister မှာသရုပ်ဆောင်ဖို့ စတင်ကမ်းလှမ်းခံရစဉ်က ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုစဉ်က IU ဟာ အရှုပ်အထွေးတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတဲ့ ကာလပါ။ ဒါ့ကြောင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပါထိခိုက်မှာစိုးတဲ့ IU ဟာ ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒါရိုက်တာနဲ့ တွေ့ဆုံ စကားပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူမဟာ My Sister ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
2. Gong Yoo ( Goblin)
ဦးလေး ဦးလေးနဲ့ အားလုံးရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရှိနေစေတဲ့ Goblin ရဲ့ Gong Yoo ဟာလည်း Goblin နေရာအတွက်ငြင်းပယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ထိုစဉ်အချိန်က ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ ယုံကြည်ချက်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်တဲ့။ သိုသော်လည်း Goblin ရဲ့ ဖန်တီးရှင် စာရေးဆရာမ Kim Eun Sook နဲ့ စကားပြောပြီးနောက်မှာတော့ စိတ်သက်သာရာရခဲ့ပြီး Goblin ဇာတ်ကောင်ကို လက်ခံဖို့ ဖြစ်လာတာပါ။
3. Park Hae Joon ( The World of the Married)
Park Hae Joon ကလည်း The World of Married မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ တုန့်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဇာတ်ကောင်ကို ကောင်းကောင်းပုံဖော်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်မရှိခဲ့သလို လိုက်ဖက်ပါ့မလားလို့လည်း တွေဝေနေခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာ Byun Young Joo နဲ့ စကားပြောမိတဲ့အခါမှာတော့ သူဟာ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ လက်ခံလိုက်ပါတယ်။
4. Suzy (Dream High)
Suzy ကလည်း Dream High မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။ ထိုစဉ်အချိန်က အဆိုပိုင်းမှာသာ ပိုမိုအားသန်ခဲ့တဲ့ Suzy ဟာ သရုပ်ဆောင်ဖို့ ယုံကြည််ချက်မရှိခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်လည်း သေချာစွာစဉ်းစားပီးတဲ့ နောက်မှာတော့ သူမဟာ Dream High မှာ ပါဝင်သရုက်ဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
5. Jun Ji Hyun ( My Love From the Stars)
Jun Ji Hyun ဟာလည်း My Love From the Stars မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ စတင်ကမ်းလှမ်းခံရစဉ်က လက်ခံပြီးသား ရုပ်ရှင်တစ်ခုကြောင့် ငြင်းပယ်ဖို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ရုပ်ရှင်ရဲ့ အချိန်စာရင်း ပြသနာတွေကြောင့် သူမအားလပ်ချိန်ရခဲ့တဲ့အတွက် My Love From The Stars ကို လက်ခံရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
6. Jung Hae In ( Pretty Noona who buys me food)
Pretty Noona who buys me food နဲ့ မောင်လေးရောဂါကို တဖန်အသက်ပြန်သွင်းပေးခဲ့တဲ့ Jung Hae In ဟာလည်း စတင် ကမ်းလှမ်းမှုကို ရရှိခဲ့စဉ်က ငြင်းပယ်ဖို့ ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ထိုစဉ်အချိန်က Prison Play Book ကို ရိုက်ကူးပြီးစီးပြီးကာစဖြစ်တဲ့အတွက် ပင်ပန်းနေတဲ့ အချိန်ပါ။ သို့သော်လည်း ဇာတ်ညွှန်းကို ဖတ်ပြီးနောက်မှာတော့ ချက်ချင်းပဲ လက်ခံခဲ့တဲ့အတွက် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Jung Hae In ကို မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးကနော် သူတို့နဲ့အရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ငြင်းမိလုဆဲဆဲ ဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲ။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေခဲ့ပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း ရင်ထဲမှာထင်ကျန်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအဖြစ် ကျန်ရှိနေတာပါပဲ။
Next Jennie ကြောင့် တစ်လအတွင်း ဝမ် 2.5 billion ဝင်ငွေရသွားတဲ့ Air Baked »
Previous « တစ်လတာ လစာကို Kim Soo Hyun အတွက် သုံးစွဲလိုက်တဲ့ Lee Hong Ki